Fakafaka: tompony fa tsy mpindrana | NewsMada
Fomba fiteny nentina anehoana hambo izy io indraindray… Saingy tsy izay ny azo andraisana azy eto fa fampahafantarana fa efa ao anaty ny « zavatra » iray. Fihavanana, firaisankina, fifampitsinjovana, tahotra an’Andriamanitra, fitsimbinana ny aina, sns, tompony fa tsy mpindrana ny Malagasy. Tsy lavitra ny misy ireo rehetra ireo fa ao anatin’ny Malagasy tsirairay.
… Raha izany, tsy ilay tena maha Malagasy ny Malagasy ange izany io mivoaka sy hita isan’andro io e! Toetra toy ny tandra apetaka eo amin’ny Malagasy ny fanaovana tsindrio fa lavo, hararaoty fa tsotra, poteho fa bado, ambakao fa dondrona, angalaro fa miahaka, sns. Toe-saina sy toe-panahy vao nipoitra taty aoriana ireo.
… Ka maninona àry no tsy avoaka fa tazonina ao anaty fotsiny ny maha Malagasy? Satria, tsy mifanaraka intsony amin’ny vanim-potoana ankehitriny, hono ». Tsy marina izany! Ny vanim-potoana tahaka izao sy ireo zava-misy ankehitriny mihitsy no mila sy mitaky ny tokony hanehoana ny maha Malagasy ny Malagasy.
Ny hasarotan’ny fiainana indrindra no tokony hifanampian’ny trano atsimo sy avaratra. Ny halatra sy fisolokiana ataon’ny « hafa » no hanehoana firaisankina eo imason’izy ireny. Ny fandrebirebena ataon’ny « sasany » no mila ijoroan’ny Malagasy fa mahafantatra tsara an’Andriamanitra eo an-tampon’ny lohany izy.
Ilay toetra tazana ety ivelany amin’ny Malagasy, ireny no nindramina fa ilay tena ao anatiny kosa, efa azy ka mila aseho. Tompon’ireny toetra ireny (fihavanana, firaisankina, tahotra an’Andriamanitra, fahalalana ny fisian’ny tody sy ny tsiny, sns) ny Malagasy fa tsy mpindrana velively!
Mila aseho ety ivelany amin’izay ny tena maha Malagasy ny Malagasy. Raha tanteraka izany, maro ny zavatra hiova any anaty fiarahamonina. Ho zary fitaratra ho an’ny zanaka ny ray aman-dreny. Ho fakan-tahaka ho an’ny tanora ny lehibe. Tsy ny tsirairay intsony no hivoatra fa i Madagasikara iray manontolo mihitsy!